This forum has been closed. Comments There are no comments in this forum. Be first and add one နေ့ စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၅-၂၄-၂၀၁၃) နေ့ စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၅-၂၄-၂၀၁၃)
ဒီကနေ့ အစီအစဉ်မှာတော့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် Shinzo Abe ဟာ နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်လောက် အတွင်း ပထမဆုံး ဂျပန်ဝန်ကြီး ချုပ်တဦးရဲ့ ခရီးစဉ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာတဲ့သတင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံချက်မှာ ရင်းနှီးမြုတ်နှံဖို့ ဂျပန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Yingluck က တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ သတင်း၊
ထိပ်တန်းသတင်းများ သမ္မတအိုဘားမား စစ်တက္ကသိုလ်မှာ မိန့်ခွန်းပြော ဂျပန်-ထိုင်း လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့် မြန်မာရှိ အမေရိကန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာများတင်ဖို့ ရက်သတ်မှတ် မြန်မာသံရုံးတိုက်ခိုက်ဖို့သံသယရှိသူနောက်ထပ် ၂ ဦး အင်ဒိုရဲဖမ်းဆီး KIO နဲ့ အစိုးရဆွေးနွေးပွဲ မြစ်ကြီးနားတွင်ပြုလုပ်မည် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာပြည်လာမည် အများဆုံးဖတ်ရှုသည့် သတင်းများ မြန်မာနိုင်ငံက စိတ်ကြွဆေးပြား ၄ သန်းခွဲ ဘန်ကောက်မှာဖမ်းမိ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ခရီး အကျိုးရလဒ် မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့မှု ဆက်ထားဖို့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေ တိုက်တွန်း Oklahoma ဘေးဒုက္ခ အမေရိကန် ကုန်ကျစရိတ် အများဆုံးထဲပါဝင် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာပြည်လာမည်အများဆုံးအီးမေးပို့သည့် သတင်းများ မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ စိုးရိမ်ရဆဲ AI သုံးသပ်အများဆုံးကြည့်ရှုသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းများ နေ့ စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၅-၂၄-၂၀၁၃) အမေရိကန်ရောက် အာရှနွယ်ဖွား လူငယ်များ VOA60 World သောကြာနေ့ မြန်မာတီဗွီ သတင်း မြန်မာ့ အင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့်ကမ္ဘာ့သတင်း စက္ကန့် ၆၀ VOA60 World